လက်ပ်တော့ပေါ်တွင်စကားဝှက်ကိုပြန်ဆယ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
သင်ခန်းစာပစ္စည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သာမန်လူတို့အဘို့ဖြည့်စွက်သည့်အချိန်လွန်သွားဖို့ဒါမှမဟုတ်သီးသန့်ပဟေဠိ၏ပုံစံအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုလက်ဆောင်တစ်ခုလုပ်ဖို့အဖြစ် Crosswords, ဆရာ, ဆရာမများအတွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ယနေ့ကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတော်လေးတိုတောင်းသောကာလအတွင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အွန်လိုင်း crossword ပဟေဠိကိုအင်္ဂါရပ်များ
အွန်လိုင်းပြည့်စုံ crossword Create အမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သင်အလွယ်တကူမေးခွန်းနံပါတ်နှင့်အက္ခရာ၏ညာဘက်ငွေပမာဏနှင့်အတူကွက်သူ့ဟာသူ generate နိုင်ပါသည်, သို့သော်အများဆုံးကိစ္စများတွင်မေးခွန်းကိုသင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်၌။ အဲဒီမှာသူကအပြည့်အဝ crossword ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားန်ဆောင်မှုများဖြစ်ကြပေမယ့်သူတို့ကအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ရန်ခက်ခဲပုံပေါ်ပေမည်။
Method ကို 1: Biouroki
တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကျပန်းသငျသညျအထူးလယ်ပြင်၌သတ်မှတ်စကားတော်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး crossword ပဟေဠိကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီ site ပေါ်တွင် register ရန်ကိစ္စများမဖွစျနိုငျ, ဒါသူတို့သီးခြားစီရေးသားဖို့ရှိသည်။
ခေါင်းစဉ် "အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" ကို select "crossword Create".
အထူးလယ်ပြင်၌တစ်ကော်မာနှင့်အတူအနာဂတ်မေးခွန်းများစကားလုံးတစ်လုံး, အဖြေကိုရိုက်ထည့်။ တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကရှိနိုင်ပါသည်။
ရလဒ် crossword အတွက်တန်းစီ၏အသင့်တော်ဆုံးဂျရွေးချယ်ပါ။ အောက်ပါ entry ကိုလယ်ပြင်တုံ့ပြန်မှုစကားလုံးများကိုအောက်ရှိ program ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ပါ။
အကြိုက်ဆုံး option ကို, သင်ကစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ် image ကို format ကိုအဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်သည် PNG။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌မိမိတို့ညှိနှိုင်းမှုမဆိုလုပ်ခွင့်ပြု။ ကယျတငျခွငျးအတှကျရှေးခယျြစရာတွေ့မြင်စေရန်, ဆဲလ်နေရာများတွင်၏အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားဖို့ cursor ကိုရွှေ့။
တစ်ဦး crossword ပဟေဠိဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက်ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ် form မှာအသုံးပြုမှုများအတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ edited ။
Method ကို 2: Puzzlecup
ဒီဝန်ဆောင်မှုကတဆင့်တစ်ဦး crossword ပဟေဠိအတွက်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ကို setting အပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့အဖြေကိုအတူတက်လာနေသောလိုင်းများ၏တည်နေရာကတည်းကယခင်နည်းလမ်းကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ ဆဲလ် / စကားများမဆိုစကားလုံးနှင့်အတူပြီးသားထပ်လျှင်, ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုသူတို့ကိုအတွက်စာလုံးပေါ်တွင် အခြေခံ. သင့်လျော် option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားသည့်စကားများတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်, အဲဒီမှာထောက်ပံ့ပေးသည်။ Auto-မထိုက်မတန်စကားများအသုံးပြုခြင်း, သင်သာသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်းသောစကားဖြင့်အတက်လာဖို့အကောင်းဆုံးသောဖွဲ့စည်းပုံဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုကိစ္စရပ်များအယ်ဒီတာဖို့တာဝန်နိုင်ပါသည်။
တုန့်ပြန်၏ပထမလိုင်းဖန်တီးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်တစ်ခုစာရွက်ပေါ်တွင်မဆိုအကြိုက်ဆုံးဆဲလ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ဆဲလ်များ၏အလိုရှိသောအရေအတွက်ကထွက် grayed ပါလိမ့်မည်အထိဆွဲယူပါ။
သငျသညျ, အဝါရောင်မှအရောင်ပြောင်းလဲမှု LMB လွှတ်ပေးရန်အခါ။ လက်ျာဘက်၌တွင်သင်သည်အဘိဓာန်ထဲကနေလက်ျာစကားလုံးရွေးချယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်အောက်ကလိုင်းကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးသားဖို့ "သင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို".
သင်အလိုရှိသောအစီအစဉ် crossword ရသည်အထိခြေလှမ်း 1 နဲ့2ကိုပြန်လုပ်ပါ။
ယခုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားလိုင်းများတဦးတည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက်ကိုသင်မေးခွန်းတစ်ခုရိုက်ထည့်ဖို့လယ်မြင်ရပါလိမ့်မယ် - "စိတ်ပိုင်းဖြတ်"။ တစ်ခုချင်းစီကိုအတန်းများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပါ။
အဆိုပါ crossword သိမ်းဆည်းပါ။ ခလုတ်ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ် "ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် Crossword"က cookies များကို၌တည်နေပါလိမ့်မယ်, အဲဒါကမှဝင်ရောက်ခွင့်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည် "ပုံနှိပ်ပါ" သို့မဟုတ် "တစ်ဦးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှ Download လုပ်".
ပထမဦးဆုံးအမှု၌, သစ်ကို tab ဟာပုံနှိပ် preview ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုအရပ်မှတိုက်ရိုက် print ထုတ်နိုင် - ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုနှိပ်ပါ, ပေါ့ပ်အပ် Menu ထဲမှာ "ပုံနှိပ်ပါ".
Method ကို 3: Crosswordus
သငျသညျအပြည့်အ crosswords ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုအတော်လေးအလုပ်လုပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီနေရာတွင်ညာဘက်အိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ရှာဖွေအခြားအသုံးပြုသူများ၏လုပျငနျးတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဓိကစာမျက်နှာတွင်, select လုပ်ပါ "crossword Create".
မည်သည့်စကားလုံးများထည့်ပါ။ ဤသည်ဖြစ်စေလက်ယာဘက်အခြမ်းကို အသုံးပြု. ပြုသောအမှုနှင့်, စကားလုံးနေရာလိုဆဲလ်တစ် string ကို၏အောဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဆွဲရန်, သင်ဆဲလ်တွေအတွက်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ခဲဆင်းကိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်။
သင်လိုချင်တဲ့ crossword ပဟေဠိဖွဲ့စည်းပုံအရသည်အထိထပ်ခါတလဲလဲ, ထို့နောက်သည်အထိ2ရက်နှင့်3လုပ်ပါ။
ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အသီးအသီးလိုင်းများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခု Define ။ မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အာရုံစိုက် - tab ကိုအဲဒီမှာပေါ်လာသငျ့သညျ "မေး" အလွန်အောက်ခြေမှာ။ မည်သည့်စာသားကို link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နယူးဆိုတဲ့မေးခွန်းကို".
ဒါကဝင်းဒိုးကိုဖြည့်စွက်၏မေးခွန်းကိုဖွင့်လှစ်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "တစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ် Add"။ ရေးထားလော့။
သင့်အနေဖြင့်ပြဿနာ၏အောက်ဆုံးမှာဆောင်ပုဒ်နှင့်အကရေးသားခဲ့သောဘာသာစကားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာသင်ဝေမျှဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သင်၏ crossword နေရာမလိုချင်ကြဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်, မလိုအပ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့မျက်နှာပြင်အပိုင်း၏ညာဘက်အာရုံစိုက်ပါလျှင်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, သင်သည်မျဉ်းမှပူးတွဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည် "စကား"။ ပြုပြင်ဧရိယာအများစုဖြစ်သော်လည်း, သငျသညျဤမေးခွန်းကိုမမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သင်ပြုသောအနေတဲ့အခါ, crossword သိမ်းဆည်းပါ။ ယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ "Save" အယ်ဒီတာရဲ့ထိပ်မှာ, ပြီးတော့ - "ပုံနှိပ်ပါ".
လူအပေါင်းတို့သည်အတန်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်ပုံနှိပ် settings ကိုလုပ်ဖို့လိုအပျတဲ့ window ပေါ်လာရှိသည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါက default ကိုစွန်ကို click နိုင်ပါတယ် "ပုံနှိပ်ပါ".
အဆိုပါ browser ကိုသစ်တစ်ခု tab ကိုဖွင့်လှစ်။ ကနေသင်တို့ကိုချက်ချင်း input ကိုလိုင်းရဲ့ထိပ်မှာအထူးခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးပုံနှိပ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက် right-click နှိပ်ပြီး drop-down menu ကနေ select လုပ်ပါ "Print ... ".
Excel, PowerPoint နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦး crossword ပဟေဠိလုပ်လုပ်နည်း
အင်တာနက်ကိုတွင်အခမဲ့လုပ်နှင့်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ပြည့်စုံ crossword မပါဘဲနိုငျကွောငျးအများအပြားန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဤတွင်သာလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်သက်သေသူများဖြစ်ကြ၏။
စက္ကန့် 30 အတွင်း crossword ပဟေဠိကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံ Visual ဗီဒီယို,